Olee otú efu nke egweri biini na Windows
Egweri biini / Mkpofu Atụmatụ
1 egweri biini (Windows)
1.1 Naghachi faịlụ site na egweri biini
1.2 Zoo egweri biini
1.3 Weghachi egweri biini
1.4 Efu egweri biini
2 Mkpofu (Macintosh)
2.1 Force Efu Mkpofu on Mac
2.2 Naghachi ehichapụ faịlụ na Mac
Ma gụọ 2.3 ahịhịa ya Mac
2.4 Wepu Efu Mkpofu Mac
3 egweri biini / Mkpofu maka ngwaọrụ ndị ọzọ
3.1 Android egweri biini
3.2 iPhone egweri biini
3.3 iPad ekpofu ahịhịa
Mgbe na-eji Windows ka ihichapụ ihe ma ọ bụ faịlụ na kọmputa gị ike ọzọ ohere na draịvụ ike gị, faịlụ na-bụghị n'ezie ehichapụ. Gị faịlụ na-nwa oge echekwara site egweri biini, ma ọ bụrụ na ị na-aga n'ihu na-efu nke egweri biini, faịlụ kwụsịkwara ịdị adị na egweri biini. Ọzọkwa egweri biini utilizes a ụfọdụ ego nke ya ohere na-echekwa ehichapụ ọdịnaya. Mgbe nke a ohere na-ejedebeghị, agadi faịlụ na-ehichapụ ike ụlọ maka ndị ọhụrụ. Ọ bụ ya mere i nwere ike ịhụ gị faịlụ efu na egweri ọbụna ma ọ bụrụ na ị dịghị bupụrụ ya.
Right pịa gị egweri biini
Họrọ egweri biini na gị windows desktọọpụ na nri pịa ya. Gị na ihuenyo ga-egosipụta a kwuo igbe dị ka nke a
Họrọ efu egweri biini
Site mkparịta ụka igbe n'aka-nri n'akụkụ nke egweri biini, họrọ efu egweri biini.
Efu nke egweri biini
Site Nhichapụ multiple ihe mkparịta ụka igbe, gosi site na ịpị EE. Ị ga-ahụ a na-enwe ọganihu mkparịta ụka igbe na-egosi na-aga n'ihu nhichapụ usoro. Ihe na gị egweri biini ga-apụ n'anya otu otu. Nke a ga-na-ewe nkeji ole na ole nyere ọnụ ọgụgụ nke ihe na gị egweri biini.
Rịba ama na ị ka nwere ike weghachite gị faịlụ mgbe egweri biini ka dechara ihichapụ ha na-adịgide adịgide.
Olee otú naghachi faịlụ site bupụrụ egweri biini
Iji weghachite faịlụ niile, nke ị na-adịgide adịgide ehichapụ si egweri biini, ị na-achọ irè faịlụ mgbake software. Wondershare Data Recovery Bụ otu nke kasị mma data mgbake ngwaọrụ m maara. Ọ na-enye gị ohere iji chọta ihe ndị ọzọ faịlụ nke e mbụ formatted ọ bụ furu efu si agbakọrọ ruru ka usoro ihe rụrụ arụ na ndị ọzọ na mbughari ngwaọrụ dị ka dijitalụ ese foto, ebe nchekwa kaadị na flash diski.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na mbido ma ọ bụ Starter Ọkachamara Mode Iweghachite bụ ihe kasị mma n'ihi na ị ngwá ọrụ na-agbake gị bara uru faịlụ. Mgbe iji ọkachamara mode, na ị na-nanị jụrụ ajụjụ ndị dị mfe, na mgbe ahụ na kọmputa jupụtara n'ime ndị fọdụrụ.
N'ihi na lagoro ezumike nka, Standard Mode Iweghachite mere maka ị nyere gị oru nka. Na nke a mode, ị ga-elu ndị ọzọ ahụmahụ na-nkà gị.
Download gị oyiri nke Wondershare Data mgbake n'ihi na windo taa, wụnye na-agba ya na kọmputa gị. Ekwe ka professionally e software ike a ngwọta maka gị. Ọzọ ihe, Adịghị ịwụnye a software na disk ebe faịlụ na data ebe ị nwere ike ida.
Data Iweghachite Iji Ọkachamara Mode
Họrọ ọkachamara mgbake mode
Mgbe ọma nwụnye nke Ọkachamara mode, na ị na-ozugbo ekwe na-eji usoro ihe omume. Na nke a mode, ị naanị na a chọrọ ịza abụọ ajụjụ ndị dị mkpa wee pịa Next na-ekwe ka usoro ihe omume na-ebu ndị fọdụrụ nke aga-eme.
Họrọ ụdị nke faịlụ na-natara
Nke a bụ gị ajụjụ mbụ. Ebe a, ị na-chọrọ họrọ faịlụ nke ị chọrọ usoro ihe omume iji weghachite. Ị nwekwara nhọrọ nke na-ahọpụta All faịlụ, ma ọ bụrụ na ihe ị na-achọ-natara bụ dị iche iche faịlụ. Ụdị faịlụ nwere ike ịbụ audio, email, video, akwụkwọ ma foto.
Họrọ ebe ị furu efu gị faịlụ
Gị abụọ ajụjụ bụ ịchọpụta na ọnọdụ ebe ị furu efu gị faịlụ. Ọ bụrụ na gị faịlụ ndị mbụ na egweri biini tupu ha okụrede, họrọ egweri biini. Ndị ọzọ partitions nwere ike ịbụ na desktọọpụ, m akwụkwọ m. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị maghị ebe gị faịlụ furu, họrọ kọmputa.
Pịa Malite naghachi gị furu efu faịlụ
Pịa na Malite na-amalite mgbake nke gị furu efu faịlụ. Ị ga-achọpụta na e nwere Raw faịlụ mgbake na Deep Doppler nhọrọ egosipụta na gị na PC na ihuenyo. Ahọpụta Deep Doppler ga iwu usoro ihe omume iji weghachite faịlụ whish furu ka a N'ihi nke formatting. N'ihi na Raw faịlụ mgbake ị ga-enwe ike inweta faịlụ furu efu ruru iche iche ihe. Ọzọkwa, ị nwekwara ike ịhọrọ eleghara ọ bụrụ na gị nzube iji weghachite faịlụ ehichapụ-adịbeghị anya na ị bụ n'aka nke ụdị usoro ị na-eji ka ihichapụ.
Agbake gị furu efu faịlụ
Ọ bụrụ na ị họrọ All faịlụ na aga ụkwụ na ụkwụ 2, a na-Ewepụtara faịlụ a ga-emere na faịlụ edemede dị ka ochie, data isi, ndịna-emeputa, email, video, ọdịyo na dị ka. Ndị a faịlụ edemede na-natara mgbe Michael. N'ihi na PPT, rar, Excel, PDF na foto gụnyere na-ejedebeghị na jpg, PNG na TIF na-previewed tupu mgbake usoro.
Ị nwere ike ịlele natara faịlụ mgbe mgbake usoro bụ-aga n'ihu.
All Gị Mkpa Maara Banyere egweri Bins
Egweri bins bụ dị ka ihe ọ bụla ọzọ ahịhịa collection bins na ị pụrụ icheta. Otú ọ dị nke a ụdị biini bụ ihe pụrụ iche ebe ọ bụ tinyere na kọmputa na ihe ọ bụla faịlụ trashed nwere ike weghachiri eweghachi. Mgbe ụfọdụ, mgbe egweri biini na-mmadụ na mberede bupụrụ, ihe nwere ike na-natara iji kacha mma data mgbake ngwá ọrụ. Ọzọkwa ruru ka ohere na egweri biini, ọ losses ochie trashed faịlụ mgbe ọhụrụ faịlụ na-kwukwara. Mgbe masịrị mgbe gị faịlụ na-efu ha, ha ka nwere ike a natara.
Mgbe egweri biini adịghị egosi na gị na desktọọpụ, ọ pụtara na akara ngosi bụ zoro ezo. Ọ dị mfe iji weghachi ya azụ ka desktọọpụ-enweghị ike. The ihe ị na-adịghị mkpa ịdị na-kọmputa ọkachamara mee ka gị na egweri biini sinanfiputa. Soro ziri ezi nzọụkwụ na ijide n'aka na egweri biini icon ga-egosi na gị na ihuenyo.
Ị nwekwara ike ịgbanwe egweri biini icon, ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị ugbu a oyiyi. Ịgbanwe gị egweri biini icon taa.
Bụ n'ebe a egweri biini on iPhone ka ịzọpụta gị site data ọnwụ?
Olee otú iji zoo ndị egweri biini Icon si gị Desktọpụ
Olee otú Play SopCast on VLC?
Black ihuenyo: Windows 7 Ga-buut Up
Windows gaghị amalite elu, ọ bụghị Ọbụna Nchekwa na ọnọdụ
6 ngwọta maka Windows Media Player njehie c00d1199
Top 5 lyrics ikwunye-na n'ihi na windo mgbasa ozi ọkpụkpọ
Ultimate ndu iji Windows 10 multiple desktop
Top 20 egwu windows 10 akwụkwọ ahụ aja maka gị na desktọọpụ
7 Ihe mkpa ka ị mara banyere Windows 10 Office
Olee otú Naghachi furu efu ma ọ ehichapụ faịlụ site na Windows 8
Download Windows DVD Onye kere Alternative maka Free
> Resource> Windows> Olee otú iji efu nke egweri biini na Windows